डच पेस्ट्री र मिठाई | Absolut यात्रा
डच पेस्ट्री र मिठाई
La नेदरल्याण्डको पेट्रोनोमी यसमा फ्रान्स, स्पेन वा इटाली जस्ता अन्य यूरोपीय देशहरूको प्रतिष्ठा र परम्परा छैन। बरु, यो डच पेस्ट्री यो दुनिया भर मा व्यापक मान्यता प्राप्त छ। डचले आफूलाई अयोग्य मीठा दाँतको रूपमा परिभाषित गर्छन् जसले खाना पकाउन र सबै प्रकारको मिठाई र मिठाईहरूको आनन्द उठाउँछन्।
जारी गर्नु अघि, यहाँ चेतावनी छ: आजको पोष्ट स्वादिष्ट र प्रलोभनहरूले भरिएको छ। डाइटमा जानेहरूको लागि पठन जारी राख्नको लागि यो उचित छैनः
1.1 Zoute ड्रप
2.1 सेन्ट निकोलस कुकीहरू
यो एक मदिरा मिसाई हो जुन हल्याण्डमा व्यापक रूपमा खपत हुन्छ, तर बेल्जियम, लक्जमबर्ग र जर्मनीको केही भागहरूमा। को zoute ड्रप ("नमकीन ड्रप") सानो, कालो घनमा बेचिन्छ। यसको उपस्थिति गमीहरूको जस्तै छ र यसको स्वादसँग मिल्दोजुल्दो छ लाईकोरिस। त्यहाँ समावेश नुनको मात्रामा निर्भर गर्दै त्यहाँ चार विभिन्न प्रकारका छन्।
लोकप्रिय डच मदिरा, zoute ड्रप
डचले केही औषधीय गुणहरू ड्रपलाई zoute मा श्रेय दिन्छन्, यद्यपि तिनीहरू वास्तवमै यसलाई खान्छन् किनभने उनीहरूलाई प्रेम गर्दछन्। केही बेकरीहरूमा तिनीहरू नरिवल सार, पुदिना, मह, तेज पात र अन्य स्वादको स्वादको साथ बेचिन्छन्।
यो छ क्लासिक बेल्जियम वाफलको एक नाजुक र caramelised संस्करण (डचमा, स्ट्रप यसको अर्थ सिरप र वाफेल यो वाफल छ)। यो मिठाई विशेष वर्गमा वर्गमा विभाजन गरी बनाईन्छ। यो तयार भइरहेको बेलामा आटा क्र्यामलाइ भर्न क्रसवाट काटिन्छ।
Stroopwafel: प्रख्यात वाफलको आकारको वफलको संस्करण
धेरै ठाउँमा तिनीहरू स्ट्रुपको साथ कुचिएको हेजलनटहरू थपेर तयार गरिन्छ, जबकि अन्य ठाउँमा आटा दालचीनीले सिलाई गरिन्छ। परिणाम सँधै रमणीय हुन्छ।
लोकप्रिय vlaai यो खमीरको पीठोबाट बनेको मिठो केक हो जुन फलले भरिएको हुन्छ (स्याउ, खुबै, अनानास, बेर वा जामुन)। केहि डच पेस्ट्री पेस्ट्रीहरूमा, अन्य सामग्रीहरू जस्तै कस्टर्ड वा रेबर्ब पनि सामेल छन्।
त्यहाँ परम्परागत vlaai का केहि धेरै विशिष्ट प्रकारहरू छन्। उदाहरणका लागि, चामल एक चावल र क्रीमले भरिएको हुन्छ, यद्यपि त्यस्ता अन्यहरू छन् जसले क्रीम वा चकलेटलाई कोरिदिएका छन्।
नेदरल्याण्ड्सको कुनै पनि शहर वा शहरको कुनै पनि सडकमा घुम्न यो हाम्रो सामान्य नाकको लागि फोफर्टजेसको अप्रिय सुगन्धद्वारा मोहित हुनु सामान्य छ। देशभरि साना सडकहरू छन् जहाँ यी सानाहरू यस समयमा तयार छन् पग्लेको माखन र पाउडर चिनी संग तातो प्यानकेक्स.
डच क्याफेहरूमा पनि पोफर्टजेहरू कफि वा चिया साथ मिठो खाजाको रूपमा बेचिन्छन्। यहाँ सम्म यो उत्पादन मा विशेष स्टोरहरु छन्, भनिन्छ poffertjeskraam.
डच पेस्ट्रीहरू विशेष गरी क्रिसमसको समयको वरिपरि फरक-फरक हुन्छन्। विशेष अवसरहरु विशेष स्वाद को लागी कल। को क्रिसमसको नेदरल्याण्ड्स मा सेन्ट निकोलसको दिन डिसेम्बर6मा मनाउन थाल्छ (Sinterklaas).
सेन्ट निकोलस कुकीहरू
उनीहरूको उपहार लिएर सेंट निकोलस आइपुगेको दिन, डच बच्चाहरूले तातो चकलेट र कुकिज खाएर पर्खाइ मीठो बनाए। वयस्कहरूले नै गर्छन्, यद्यपि हातमा गिलासको मदिरा साथ।
सेन्ट निकोलस दिवस को लागी पेपरोटेन
सन्त निकोलसको सहयोगी, पिट साना व्यक्तिहरूमा मिठाई वितरणको जिम्मामा छन्: पेपरोटेन (राई, मह र anise बाट बनेको अनियमित आकारको कुकीज) र kruidnoten अदुवा। यसले भागको अंश पनि वितरण गर्दछ काँध, एक पफ पेस्ट्री बदाम पेस्ट भरिएको।
विश्वका अन्य भागहरूमा जस्तै नेदरल्याण्ड्समा क्रिसमस दिवस परिवारको रूपमा मनाइएको छ। भोज संग टु .्गिन्छ केर्स्टोल, फल किशमिश रोटी जो प्राय जसो बदाम पेस्टले भरिन्छ। यो केक, डच पेस्ट्रीमा एक क्लासिक नुस्खा, जर्मनी र अन्य मध्य यूरोपीय देशहरूमा तयार पारेको जस्तै छ।
नेदरल्याण्ड्समा क्रिसमसको खानामा चेरी: क्यारस्टोल
अधिक धार्मिक घरानामा उनीहरूले अर्को विशेष डेजर्टको लागि केरस्टोलको विकल्प लिन रुचाउँछन्। बेस्चुटले मुइजेसलाई भेट्यो, एक डच स्पंज केक सुगन्धित anise मा कभर। यो येशूका जन्म मनाइन्छ र यो विस्तार द्वारा सबै वर्ष मा कुनै पनि जन्म मनाउन को सेवा छ जो कोमलता संग छ।
नयाँ वर्षको पूर्वसंधै, डच घरहरूमा भान्छाबाट आउने डिप फ्रिरहरूको तेलको गन्ध सामान्य छ। तिनीहरूमा स्वादिष्ट ओलिबोलन, आटा फ्राइटरहरू जुन एक्लै सर्प गरिएको चिनीको साथ सेवा गरिन्छ वा स्याउ र किशमिशका टुक्राले भरिन्छ।
वर्ष सुरू गर्न सब भन्दा राम्रो मिठो: ओलिबोलन
त्यहाँ ओलिबोलनका केही क्षेत्रीय प्रकारहरू छन् (अनुवाद: "तेल बनहरू")। लिम्बर्ग क्षेत्रमा उदाहरणका लागि तिनीहरू डोनट्स जस्तै आकारका छन् र कार्निवल मनाउन पनि तयार छन्। अर्कोतर्फ, उत्तरी प्रान्तहरूमा यी पक्राउहरू विशेष सावधानीका साथ तयार छन् र विशेष गरी गोलाकार, लगभग गोलाकार छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » डच पेस्ट्री र मिठाई